तपाईंको अर्को वेब प्रोजेक्ट अनुमान कसरी गर्ने Martech Zone
शुक्रबार, मे 28, 2010 आइतबार, अगस्त 10, 2014 Douglas Karr
यो कहिले हुँदैछ?
यो प्रश्न हो मलाई कुट्छ प्रोजेक्ट उद्धृत गर्दा। तपाईंले वर्षौंसम्म त्यसो गरेपछि सोच्नुहुन्छ कि म मेरो हातको पछाडि जस्तो प्रोजेक्ट उद्धृत गर्न सक्षम हुनुपर्दछ। यो कसरी काम गर्छ भन्ने होइन। प्रत्येक परियोजना नयाँ छ र यसको आफ्नै चुनौतीहरू हुनेछन्। मसँग एउटा प्रोजेक्ट छ जुन late० दिन ढिला भयो केवल एक द्वारा गरिएको सानो परिवर्तनका कारण एपीआई कि हामी वरपर काम गर्न असमर्थ छौं। ग्राहक ममा निराश छ - यति नै - मैले तिनीहरूलाई भनेको केहि घण्टा मात्र लाग्छ भनेर मैले भने। यो थिएन कि मैले झूट बोलेको हो, यो मैले सोचेको थिइनँ कि सुविधा यसबाट हटाइनेछ एपीआई हामी भर पर्दै थियौं। मसँग मुद्दाको वरिपरि काम गर्ने संसाधनहरू छैन (हामी नजिक हुँदै छौं, यद्यपि!)।
म अर्को दिशामा जान र परियोजना अनुमानको सट्टा घण्टा चार्ज गर्न अस्वीकार गर्छु, यद्यपि। मलाई लाग्छ घण्टाको लागि भुक्तानले ठेकेदारहरूलाई ओभर-टाइम र अधिक बजेटमा जान प्रोत्साहित गर्दछ। प्रत्येक प्रोजेक्टमा मैले घण्टा काम गरिरहेको छु भनेर कसैलाई भुक्तान गर्दै छु। तिनीहरू सबै ढिला छन् र म कामले दिक्क परेको छु। यसको विपरित, मैले परियोजना शुल्क तिर्ने प्रोजेक्टहरू समयमै आएका छन् र अपेक्षाहरूभन्दा बढी छन्। मलाई मेरा ग्राहकहरूको अपेक्षा पनि बढि मन पर्छ।
चार गल्तीहरू जुन तपाईंको अर्को अनुमान उडाउँदछ:
पहिलो गल्ती: हिसाब गर्नुहोस् कि यसले तपाईंलाई के गर्न सक्नेछ ग्राहकले के भने। गलत। तपाईंले आफ्नो पहिलो गल्ती गर्नुभयो र ग्राहकले सोधेको कुराको अनुमान गर्नुभयो, के होईन ग्राहक वास्तवमा चाहन्थ्यो। दुई जहिले फरक हुन्छन् र ग्राहक सधैं आधा मूल्यको लागि दुई गुणा बढी चाहान्छ।
दोस्रो गल्ती: तपाईंले ग्राहकको ढिलाइ ध्यानमा लिएन। प्रोजेक्टमा दुई हप्ता ढिलाइ थप्नुहोस् किनकि तिनीहरूको आईटी विभागले तपाईंलाई आवश्यक पहुँच प्राप्त गर्दैन। म सँधै ग्राहकहरु लाई भन्न कोशिस गर्छु, यदि तपाईले मलाई "A" तोकिएको मितिबाट प्राप्त गर्नुभयो भने म डेलिभर गर्न सक्छु। यदि तपाईं गर्नुहुन्न भने, म कुनै पनि मिति प्रतिबद्ध गर्न सक्दिन। ग्यान्ट चार्ट जादुई रूपमा परिवर्तन हुँदैन, मसँग अन्य ग्राहकहरू र कार्यहरू पहिले नै निर्धारित छन्।
तेस्रो गल्ती: तपाईंले ग्राहकलाई पहिलेको डेलिभरीमा दबाब दिन अनुमति दिनुभयो। तपाईंले समावेश गर्नुभएन त्रुटि-ह्यान्डलिंग र परीक्षण। ग्राहक लागतहरू कटौती गर्न चाहन्थे ताकि तिनीहरूले तपाईंलाई केवल यो सम्पन्न गर्न भने। गलत जवाफ! यदि ग्राहक त्रुटि-ह्यान्डलिंग र परीक्षणको लागि भुक्तान गर्दै छैन, भने पुनः-आश्वस्त हुनुभयो कि तपाई लाइभ पछि तपाइँ लामो बगहरू र मर्मतसम्भार फिक्सहरूमा घण्टा खर्च गर्दै हुनुहुन्छ। यसको लागि कुनै पनि तरिका चार्ज गर्नुहोस् - तपाईं अब वा पछिको कार्य गर्दै हुनुहुन्छ।
चौथा गल्ती: अपेक्षाहरू जुन बाटोमा परिवर्तन हुन्छन्, कार्यक्रमहरू गडबडी हुन्छन्, प्राथमिकताहरू बद्लिन्छन्, समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन् जुन तपाईंले आशा गर्नुहुन्न, मान्छे फर्कन्छन्…। तपाई जहिले पनि अपेक्षा गरेको भन्दा धेरै पछि हुनुहुनेछ। छोटो समयरेखामा सहमत नगर्नुहोस् एक ग्राहकको दबाबमा। यदि तपाईंले आफ्नो वास्तविक आशामा अडिनुभयो भने, तपाईंले सम्भवतः तिनीहरूलाई बनाउनुहुने थियो!
हालसालै, हामीले एउटा कम्पनीसँग एउटा सम्झौता शुरू गर्‍यौं जहाँ हामी एक प्रोजेक्टको डाउन डाउन भुक्तानी र त्यसपछि अपग्रेडहरू र मर्मतको लागि चलिरहेको मासिक दरमा सहमति जनायौं। हामी बसे र छलफल लक्ष्यहरू र उनीहरूको प्राथमिकताहरू के थिए - र प्रयोगकर्ता इन्टरफेस, डिजाइन, वा कुनै अन्य कुरा कहिले पनि छलफल गरेन। हामीले कुनै नराम्रो 'Go live' मिति सेट गर्‍यौं जुन आक्रामक थियो, तर प्याटले पूर्ण रूपमा बुझेका थिए कि यो प्रोजेक्ट अरु भन्दा केही सुविधाहरूमा अगाडि हुन सक्छ। हामीले सुरूवातलाई नailed्यौं र पहिले नै संवर्द्धनहरूको सूचिमा अगाडि बढिरहेका छौं। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, हामी दुबै खुशी छौं.
म धेरै अनुमानहरू उड्दिन तर यो कहिले काहिं हुन्छ। वास्तवमा, म भर्खरको सम्झौता फिर्ता दिन तयार भइरहेको छु किनभने ग्राहकसँग केहि प्रोजेक्टहरूमा काम गरिसके पछि, मलाई थाहा छ कि ग्राहकले केही अस्पष्ट लक्ष्यहरूमा सहमति जनाए पनि उनीहरू खुशी नभए सम्म उनीहरू खुशी हुने छैनन्। दस पटक के सम्झौताको लायक छ। म केवल इच्छा गर्दछु कि म यो मान्छेलाई पहिले देख्न सक्दछु। तिनीहरू आवश्यक उनीहरूको स्रोतहरू घण्टामा भाँडामा लिनको लागि ... तिनीहरूसँग एक प्रोजेक्ट-आधारित अनुमानमा प्रवेश एक हत्यारा हो।
मैले पत्ता लगाएको वा वितरण गरिरहेकको सफल प्रोजेक्टहरूमा के समान छ भनेर पत्ता लगाउन सुरू गर्दैछु। यसको धेरैजसो मैले वास्तवमै सिकेका थिए बिक्री प्रशिक्षण मेरो कोच, म्याट नेटलटनको सहयोगमा। मैले यो पनि थाहा पाइन कि मेरो परियोजनाहरूको अधिकतर सफलता सुरु भयो मैले कहिले पनि ग्राहकलाई हस्ताक्षर गर्नु भन्दा पहिले!
अनुमानलाई नेल कसरी गर्ने:
पत्ता लगाउ जब ग्राहकले यसलाई आशा गर्दछ। यो उनीहरूको अपेक्षाहरू जुन सब भन्दा महत्त्वपूर्ण छ। तपाइँ भेट्न सक्नुहुन्छ कि तपाइँसँग काम पूरा गर्न एक बर्ष छ। किन २ हप्ता अनुमान गर्नुहोस् यदि तिनीहरू २ महिनाको लागि खुशी छन्? तपाईं अझै २ हप्तामा काम पूरा गर्न सक्नुहुनेछ र सबै अपेक्षाहरू पार गर्नुहोस्!
पत्ता लगाउ यो ग्राहकलाई के लायक छ। यदि तपाइँ यसको लायक के हो भनेर फेला पार्न सक्नुहुन्न भने, बजेट के हो भनेर पत्ता लगाउनुहोस्। के तपाईं परियोजना पूरा गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो बजेटमा आधारित अपेक्षाहरू पार गर्न सक्नुहुन्छ? तेसो भए गर। यदि तपाईं सक्नुहुन्न, त्यसो भए त्यसलाई छोडिदिनुहोस्।
के बाहिर आंकडा यस परियोजनाको लक्ष्य हो। लक्ष्य बाहिर सबै कुरा बाहिरी हो र पछि काम गर्न सकिन्छ। लक्ष्य सेट गर्न काम गर्नुहोस् र त्यो लक्ष्य पूरा गर्नुहोस्। यदि लक्ष्य भनेको एक ब्लग अप र चालु प्राप्त गर्ने हो भने, त्यसपछि ब्लगलाई माथि राख्नुहोस्। यदि यो एकीकरण निर्माण गर्ने हो जुन ईमेल पठाउँदछ, त्यसो भए ईमेल पठाउन पाउनुहोस्। यदि यो अधिग्रहण लागत कम गर्न को लागी, लागत तल प्राप्त गर्नुहोस्। यदि यो एक रिपोर्ट विकसित गर्न को लागी, रिपोर्ट प्राप्त र चलिरहेका छ। धेरै पछि आउँछन् र राम्रो-ट्युनिंग एक आक्रामक समयरेखाको साथ एक ठूलो मूल्यमा आउन सक्छ। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुनमा काम गर्नुहोस्।
बाट पछाडि कार्य गर्नुहोस् तपाईंको उत्कृष्टताको स्तर। मेरा धेरैजसो ग्राहकहरूले मलाई कामको लागि प्रयोग गर्दैनन्, उनीहरूले मलाई पैसाको ठूला सामानहरू कुटेर पैसा कमाउँछन् र सजिलो काम पूरा गर्नका लागि उनीहरू भरिन्छन्। म ती ग्राहकहरूलाई माया गर्छु र म उनीहरूको अपेक्षाहरू भन्दा बढि लक्ष्यहरू प्रदान गर्दछु उनीहरूले तिर्ने भन्दा बढी मूल्य। हाम्रो प्रोजेक्टहरूको अन्त्य सम्म, हामी प्रायः बजेट वा अधिक लक्ष्यहरू भन्दा कम हुन्छौं, र हामी तालिकामा अगाडि छौं। उनीहरूले मलाई उनीहरूको अपेक्षाहरू पार गर्न पर्याप्त कोठा प्रदान गर्छन् ... यो सरल छ।
म अझै पनि मेरो दरहरू कम गर्न र पहिले समाप्त गर्न दबाब दिन्छु, मलाई लाग्छ कि प्रत्येक प्रबन्धकले ठेकेदारहरूसँग काम गर्दा उनीहरूको लक्ष्य के हो सोच्दछन्। यो धेरै खराब हो कि तिनीहरू त्यो छोटो अवलोकनका थिए। म केवल ग्राहकहरूलाई थाहा दिन चाहन्छु कि छोटो समयरेखा र कम पैसाले सोधेको कामको गुणवत्तामा प्रत्यक्ष असर गर्दछ उनीहरूले मलाई भाडामा लिएका छन्। एक महान कन्ट्र्याक्टरको भुक्तानीको बारेमा महान कुरा के उसले मूल्यवान छ त्यो उसले डेलिभर गर्ने छ… र तपाइँ आशा गर्न सक्नुहुन्छ कि उसले डेलिभर गर्नेछ। जब तपाइँ अंडरकट गर्न जारी राख्नुहुन्छ वा तपाइँका ठेकेदारहरूलाई मृत्युमा पिट्नुहुन्छ, जब अचम्म नमान्नुहोस् कुनै पनि ती मध्ये कुनै पनि बाहिर काम। 🙂
म पनि सबै समय आउटबिड हुन्छु। पछिल्लो पटक यो भयो, कम्पनीले छोटो अवधिको समाधानको विकल्प छान्छन् जुन उनीहरू प्रत्येक ग्राहकसँग पुनर्विकास गर्न जान्छन्। मेरो मूल्य निर्धारणको लगत्तै १. times गुणा जति थियो, तर म यसलाई निर्माण गर्दैछु ताकि तिनीहरूले आफ्नो प्रत्येक ग्राहकको साथ अनुप्रयोगलाई पुन: प्रयोग गर्न सक्दछन्। सीईओले वास्तवमै मसँग चुकित पारे जब उनले मलाई बताए कि उनले कतिपय ठेकेदारसँग मैले “कति बचत गरे” (मैले सुझाव दिएका ठेकेदार)। अहिलेबाट चार ग्राहक, उसले implementation पटक कार्यान्वयन लागत तिरेको छ। डमी।
म मुस्कुराएँ, र मेरो अर्को खुशी खुशी, अधिक सफल, र अधिक लाभदायक ग्राहक मा लागे।
टैग: परियोजना अनुमानप्रोजेक्ट टाइमलाइनवेब प्रोजेक्टवेब साइट परियोजनावेबसाइट परियोजनावेबसाइट परियोजना समयरेखावेबसाइट टाइमलाइन
मई 29, 2010 मा 6: 58 एएम
ठीक डग भने। म अझै पनि यो संग संघर्ष गर्दछ। जब मैले एक वेब साइट पूरा गर्न सक्दछु भनेर सोधिँदा मैले जवाफ दिन सिकेकी छु, "जुन मैले माग्ने सबै कुरामा तपाईं कत्तिको उत्तरदायी हुनुहुन्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ।"
ह्यारी डी होवे
मई 30, 2010 मा 3: 58 PM
म तपाइँको क्यान्डर, डग को कदर गर्छु म एक अन्य उत्तम अभ्यास थप्ने छु - तपाइँ ग्राहकलाई सूचित राख्नुहोस् र पारदर्शी हुनुहोस्। यी सबैले विश्वासको केही स्तरहरू अनुमान गर्दछ।